DELTA: AHAPỤLA ỤKỌCHUKWU AHỤ ATỌỌRỌ – hoo!haa!!
Ndi uwe ojii nke steeti Delta anapụla agụ ihe ọ kpụ n’ọnụ, site na-ịnapụta ụkọchukwu ndi ụka Katọliki ahụ bụ Rev. Fr. Kristofa Ogaga, nke ụlọ ụka Imanuel dị n’Aragba Oviri-Okpe, n’okpuru ọchịchị ime obodo Okpe na steeti Delta, bụ onye atọọrọ atụ na nwa mgbe nta gara aga.
Aka ndi uwe ojii ahụ akparakwana ụfọdụ ndi mmadụ ana-enyo enyo maka ọtụtọ ahụ atọọrọ ya bụ ụkọchkwu.
Onye isi ndi uwe ojii nke steeti Delta bụ Muhammad Mustafa, gbara ama nnapụta anapụtara ụkọchukwu a.
Onye isi ndi uwe ojii a kwuru n’ọbụ n’okporo ụzọ ọgba wara wara ahụ siri Eku gawa Abraka, n’okpuru ọchịchị ime obodo Ọwụwa Anyanwụ Ethiope nke steeti Delta ka-anapụtara ụkọchukwu a.
O kwuru na-ana aga n’ihu ime ndi a aka ji eji nnyocha maka ọtụtụ atọrọ ụkọchukwu ahụ. Ọ sịrị na mgbe ha mechara nnyocha ha, na-aga akpụga ha ụlọ ikpe.
Onye isi ndi uwe ojii ahụ sịrị na ụkọchukwu a bụ Ogaga alọhachikwurula ndi ụka ya nakwa ndi ezinụlọ ya.
N’okwu nke ya, onye isi ụmụ ntorọbịa Urobo, akpọrọ Urhobo Progressive Union, UPU, bụ Kọmred Nicholas Ọmọkọ, toro ndi uwe ojii steeti Delta maka mbọ ha gbara iji hụ na-atọrapụrụ ụkọchukwu a bụ Kristofa Ogaga.
Kọmred Omọkọ bụ onye siri n’ọnụ onye enyemaka nke mgbasa ozi ya bụ Kọmred Fridọm Devidsịn Ọnajite kwuputa okwu sịrị na ndi uwe ojii ga-agba mbọ ịhụ na-ekpere ndi a ejidere, ikpe n’ụzọ kwesịrị ihe ha mere. N’okwu ya, nke a ga-enye aka igbochi ndi ọzọ isoro ajọ ụkpụrụ ha na mpaghara ahụ.
Previous Post: ILU MAKA AKA ỌRỤ DỊ ICHE ICHE
Next Post: ENUGWU: ỤMỤ NWANYỊ NDI AHỊ NA-ACHỊLIRI UGWUANYỊ AKA ELU.